အရည်အသွေးမြင့်မား filter ကိုအိတ် တရုတ်ထုတ်လုပ်သူ
အိတ်စုဆောင်းခြင်း High Quality ဖုန်,High Quality ဖုန်မှုန့်အိတ်,Glass ကို Fiber Nonwoven Filter ကို Bag
Botou Hengrui Environmental Protection Equipment Co. Ltd. [Hebei,China] လုပ်ငန်းအမျိုးအစား: Manufacturer အဓိကစျေးကွက်များ: Worldwide ထုတ်ကုန်: 61% - 70% ဖေါ်ပြချက်: အိတ်စုဆောင်းခြင်း High Quality ဖုန်,High Quality ဖုန်မှုန့်အိတ်,Glass ကို Fiber Nonwoven Filter ကို Bag
Home > ထုတ်ကုန်များ > ဖုန်မှုန့်ကောက်ခံရေး Fittings > အိတ်စုဆောင်းခြင်းမြေမှုန့် > အရည်အသွေးမြင့်မား filter ကိုအိတ်
အရည်အသွေးမြင့်မား filter ကိုအိတ်
 အရည်အသွေးမြင့်မား filter ကိုအိတ်
သောကြောင့်သီးသန့်စစ်ထုတ်ရန်ပစ္စည်း coated ပြည်တွင်းဖန်ဖိုင်ဘာများ၏အရည်အသွေးနှင့်ဆိုးအရည်အသွေး, ဖန်ခွက်ကိုဖိုက်ဘာဖုံးလွှမ်း filter ကိုပစ္စည်း၏အရည်အသွေးကအလွန်အရေးပါသည်။ အောက်ပါအထူးပစ္စည်းကိရိယာမပါဘဲဖန်ဖိုင်ဘာရုပ်ရှင် filter ကိုပစ္စည်းများ၏အရည်အသွေးပြဿနာခွဲခြား, ကြှနျုပျတို့အလေ့အကျင့်၌ထချုပ်ဖော်ပြကြပြီအများအပြားနည်းလမ်းများအကြောင်းပြောဆိုရန်မည်သို့ဖြစ်ပါတယ်။
ထုတ်လုပ်သူများကထောက်ပံ့ပေးသည့်နမူနာများ 1. အလိုလိုဖော်ထုတ်ခြင်း:
1. စိတ်။ ပူပြင်းတဲ့ဖိကျွမ်းကျင်မှုအားဖြင့်ထုတ်လုပ်အဆိုပါဖန်ဖိုင်ဘာ၏ခံစားချက် coated filter ကိုပစ္စည်းကအရမ်းချောဖြစ်ပြီး, အသီးအသီးထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံ၏စိုစွတ်စေသောအသိသို့သော်နှစ်ခု၏ခံစားမှုကွဲပြားသော်လည်းကော်ဖန်ဖိုင်ဘာ coated filter ကိုပစ္စည်း၏အသွင်အပြင်, သိသာစိုစွတ်ဖြစ်ပါသည် ပစ္စည်းများမဆိုအမှု၌သိသိသာသာကွဲပြားခြားနားသည်။
2. ကော်ဖန်ဖိုင်ဘာ coated filter ကိုပစ္စည်းများ၏ကော် 90% ကိုအသုံးပြုအထွေထွေအော်ဂဲနစ်အရည်ပျော်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကော်ဖြစ်ပါသည်, ဖန်ခွက်ကိုဖိုက်ဘာ coated filter ကိုပစ္စည်းအဆိုပါကော်ဆုံးရှုံးနိုင်ပါသည်, ထိုအော်ဂဲနစ်အရည်ပျော်ပစ္စည်းအတွက်စိမ်လျှင်ဒါ, ထို့နောက်ရုပ်ရှင်ကိုအလွယ်တကူနိုင်ပါတယ် ဖန်ခွက်ကိုထည်ကနေဖယ်ရှားနှင့်ဘုံအော်ဂဲနစ်အရည်ပျော်ပစ္စည်းရရှိနိုင်ပါသည်။ benzene, ketones, lipids နှင့်အခြားအော်ဂဲနစ်ပျော်ရည်။
3, ကော်ဖန်ဖိုင်ဘာရုပ်ရှင် filter ကိုပစ္စည်း၏အသုံးပြုမှုကိုမြင့်မားတဲ့အပူချိန်ဝိသေသလက္ခဏာများကိုဆီးတားမနိုင်, ထို့နောက် PTFE microporous အမြှေးပါးဖန်ခွက်ကိုဖိုက်ဘာအခြေစိုက်စခန်းအထည်ကနေအဝတ်မခြုံဘဲလျက်, ပူ Press ဖန်ဖိုင်ဘာရုပ်ရှင် filter ကိုပစ္စည်းနိုင်ပြီး 100 ခန့်ဒီဂရီအပူရနိုင် 300 ၏အပူချိန်မှာအဝတ်မခြုံဘဲမရနိုင်ပါ။
နှစ်ယောက်ဖန်ဖိုင်ဘာ၏အရည်အသွေးခွဲခြားလက်တွေ့တွင်အမြှေးပါး filter ကိုအိတ်ဖုံးလွှမ်းကြ၏။
1. အလေ့အကျင့်ရှိမှုစနစ်ခုခံဖန်ဖိုင်ဘာ coated filter ကိုအိတ်၏အရည်အသွေးကိုစမ်းသပ်များအတွက်အဓိကစံဖြစ်ပါတယ်။ စစ်ဆင်ရေးမှာပူ Press ဖန်ဖိုင်ဘာ coated ဖုန်မှုန့် filter ကိုအိတ်နှင့်ကော်ဖန်ဖိုင်ဘာရုပ်ရှင် filter ကိုအိတ်၏ခုခံအပြောင်းအလဲများကအလွန်ကွဲပြားခြားနားပါသည်။ ဖုန်မှုန့်အိတ်ပူ Press ဖန်ဖိုင်ဘာ coated နှင့်အတူမြေမှုန့် remover ၏စစ်ဆင်ရေးခုခံနိမ့်သည် ဖြစ်. , အရမ်းချောချောမွေ့မွေ့ဖြစ်ပြီး, ကော်ဖန်ဖိုင်ဘာကိုအသုံးပြုသည်။ အဆိုပါ filter ကို၏အလုပ်လုပ်ကိုင်ခုခံမသာမြင့်မားသည်, ဒါပေမယ့်လည်းဒါကြောင့်ပိတ်ဆို့သည်အထိမြင့်တက်ဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်, နှင့်ကျသွားပလပ်စတစ်ရုပ်ရှင်အဲဒီမှာဖြစ်လိမ့်မည်။ ငါလက်သီးဖြင့်ထိုးဖောက်ကော်ဖန်ဖိုင်ဘာအပ်မြှေးပါး filter ကိုအိတ်ဥပမာတစ်ခုအသေခံပြီးနောက်လေးနာရီဖွင့်လှစ်ခံစားခဲ့ရမြင်ကြပြီ။ ဒါကြောင့်စစ်ဆင်ရေးအတွင်း, ကျနော်တို့ filter ကို၏ခုခံစစ်ထုတ်၏ခုခံစီရင်ခြင်းကိုခံရနိုင်သည်ကိုတွေ့နိုင်ပါသည်။
2, အဆိုပါ filter ကိုအိတ် filter ကိုအိတ် filter ကိုအိတ်ကောင်းကောင်း run နေခဲ့ပြီး, ဒါပေမယ့်အချို့အကြောင်းပြချက်အခြားထုတ်လုပ်သူများကထုတ်လုပ်ဖန်ဖိုင်ဘာ coated filter ကိုအိတ်၏သေးငယ်တဲ့ငွေပမာဏကိုပြောင်းလဲပြီးနောက်, မြေမှုန့်စုဆောင်း၏ခုခံပြောင်းလဲမှုကအလွန်သိသာသည်မဟုတ်, ဤအခြေအနေကိုတတ်နိုင်သမျှလျှင် မြေမှုန့်စုဆောင်း၏ခုခံ၏ပြောင်းလဲမှုအနေဖြင့်စစ်ထုတ်အိတ်၏အရည်အသွေးကိုခွဲခြားနှင့်ဤအချိန်တွင် filtration ဖြင့်အစားထိုးနိုင်ပါသည်မဟုတ်ပါဘူး။ အိတ်ပြေးပြီးနောက်တစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်လ, တစ်ဦး filter ကိုအိတ်ဖယ်ရှားသည်။ အဆိုပါ filter ကိုအိတ် (မတိုင်မီကဲ့သို့တူညီသောမဟုတ်) ဟာအလွန်ပျော့ပျောင်းသည်ဆိုပါက, ဒီ filter ကိုအိတ်ဖုန်မှုန့်အိတ် coated ပူပြင်းတဲ့ Press ဖန်ဖိုင်ဘာဖြစ်ရမည်အဆိုပါ filter ကိုအိတ်ခိုင်မာစေသဖြင့်, ကိတ်မုန့်တည်းဟူသောရုပ်ဆင်းသဏ္ဌာန်လျှင်, (ထိုထုံးကိုခြစ်ဖို့ခက်ခဲပြီး နှိမ့်ချ) သို့မဟုတ်တစ်ဦးဝတ်ရှိသည်။ ယင်းအမြှေးပါးကျရောက်လျှင်, filter ကိုအိတ်၏အရည်အသွေးကိုအရည်အချင်းပြည့်မဟုတျပါဘူး, နှင့်အရည်အချင်းပြည့်မီအမြှေးပါး filter ကိုအိတ်တတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးအစားထိုးသင့်ပါတယ်။
ဆက်စပ်ထုတ်ကုန်များစာရင်း: အိတ်စုဆောင်းခြင်း High Quality ဖုန် , High Quality ဖုန်မှုန့်အိတ် , Glass ကို Fiber Nonwoven Filter ကို Bag , အိတ်စုဆောင်းခြင်းမြေမှုန့် , အထည်အိတ်စုဆောင်းခြင်းစက် , စက်မှု Bag စုဆောင်းခြင်းစက် , Dacron ဖုန် Bag စုဆောင်းခြင်း Cement , Cast ကိုသံ Rotary Valve စုဆောင်းခြင်းမြေမှုန့်